Dharka gobolka Galician: Taariikhda iyo walxaha ka kooban | Wararka Safarka
Luis Martinez | 09/09/2021 11:00 | dhaqanka, Espana
Waan fahamsanahay sida Dharka gobolka Galician kii ay ragga iyo dumarka gobolkani hore u isticmaali jireen si joogto ah. Waa run kan loo adeegsaday hawl maalmeedku ma ahayn kii fasaxyada loo adeegsan jiray. Si la mid ah, waxaa jiray kala duwanaansho u dhexeeya gobollada kala duwan iyo xitaa golayaasha Galicia.
Si kastaba ha noqotee, dharka gobolka Galician wuxuu leeyahay, tan iyo wakhtiyadii hore, midnimo ka weyn tan bulshooyinka kale ee Isbaanishka. Ragga iyo dumarka labaduba waxay mar walba ka kooban yihiin dhar isku mid ah, in kasta oo ay jiraan isku -darka iyo hooska kala duwan. Laakiin, xitaa marka la eego kan dambe, kan austerity iyo midab yar oo kala duwan dhammaantood. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato dharka gobolka Galician, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhrinta.
1 Taariikh yar oo ah dharka gobolka Galician
2 Dharka gobolka Galician ee haweenka iyo ragga
2.1 Dharka Galician ee caadiga ah ee dumarka
2.2 Dharka Galisiga ee caadiga ah ee ragga
3 Goorma ayaa la adeegsadaa dharka gobolka Galbeedka?
Taariikh yar oo ah dharka gobolka Galician
Kooxda muusikada oo ku labisan dharka gobolka Galician
Aad bay u adag tahay in laga hadlo asalka dharka Galicia ee caadiga ah (halkan waxaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan meelaha quruxda badan ee gobolkan). Laakiin waxay dib ugu noqdaan qarniyo badan. Dadka deggan dhulka miyiga ah ayaa isku milmay dharkii awoowayaashood waxayna u sii gudbiyeen farcankooda.
Xaqiiqdii, barashada dharkaan ma aysan bilaaban ilaa bartamihii qarnigii XNUMX -aad, markii Romanticism waxay kicisay xiisaha dhaqammada asaliga ah ee magaalooyinka. Natiijada tani waxay ahayd Bulk Folk Society, oo ay abuureen waxgarad sida Emilia Pardo Bazán o Manuel Murguia si loo soo nooleeyo caadooyinkii iyo dhaqammadii Galisiga.
Waxqabadyadiisa waxaa ka mid ahaa aasaaska heesaha gobolka oo doonayay inay ku labistaan ​​dharka caadiga ah. Markaas bay ahayd markii la isku dayay in la soo ceshado dharka gobolka Galician. Waqtigaas, waxaa durbadiiba lagu beddelay dhar aad u casri ah oo ka samaysan dhar kala duwan oo lagu abuuray rabitaanka Kacaankii Warshadaha. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in la baaro.
Waxaa la ogaaday in dharka caadiga ah ee Galicia uu dib ugu soo laabto, ugu yaraan, ilaa Qarnigii XVII, sida ay ugu muuqatay dokumentiyo kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah, waraaqaha nootaayada ee meherka aroosyada iyo dhaxalka lagu taxay. Waxa kale oo la arkay in, waqtiyadaas, ay ahaayeen petrucios ama ka weyn meesha calaamadeeyay moodooyinka iyo sidoo kale in, oo leh dharka, duruufaha kuwa xirtay la tilmaamay. Tusaale ahaan, waxaa jiray maro -gacmeedyo codsiyo, goonno loogu talagalay dumarka la qabo ama kuwa keligood ah, iyo diidmada maqnaanshaha.
Dhinaca kale, dharka gobolkaas waxaa lagu sameeyay dhogor ama dhar linen ah oo helay magacyo kala duwan iyadoo loo eegayo soo saariddooda ama asal ahaan. Sidaa darteed, picote, estameña, laambad, nazcote, sanel, jiid ama baeta.
Sidaan kuu sheegnay, dhammaan dharkaan waxaa laga fududeeyay Kacaankii Warshadaha sidoo kale waqtigaan saameynta magaalooyinka ayaa lagu soo bandhigay suudhka. Sidoo kale, sharraxaaddii farsamada gacanta ayaa loo baneeyay aqoon isweydaarsiga tolidda, intaas oo dhanna, waxaa jiray jaangooynta horumarka leh ee dharka gobolka Galiciya oo ilaa maanta badbaaday.
Dharka gobolka Galician ee haweenka iyo ragga
Markaan waxoogaa taariikhi ah samayno, waxaan kaala hadli doonnaa dharka ka kooban dharka Galician ee dumarka iyo ragga. Si gooni ah ayaanu u arki doonnaa, laakiin waxaa xiiso leh inaad ogaato in qaarkood ay ku badan yihiin labada jinsi
Dharka Galician ee caadiga ah ee dumarka
Dharka gobolka Galician ee haweenka
Astaamaha aasaasiga ah ee dharka dhaqameedka Galician ee haweenku waa goonnada cas ama madoow, kabka, qandhada dengue iyo xijaabka. Marka laga hadlayo kan koowaad, oo sidoo kale loo yaqaan saya ama basquiñaWay dheer tahay, inkasta oo aysan qasab ahayn inay dhulka taabato, marka lagu daro, waa inay hal iyo badh u rogtaa dhexda.
Dhankeeda, macawishu waxay ku xidhan tahay dhexda darafka kore. Xagga macaashka ama daaqada, waxaa loo laalaabaa badh si loo helo qaab saddex -geesood ah oo madaxa lagu xidho darafyadiisa. Intaa waxaa dheer, waxay noqon kartaa dhowr midab oo, mararka qaarkood, koofiyad caws ama koofiyad ayaa la saaraa, taas oo la mid ah, laakiin ka yar.
Dengue wuxuu mudan yahay in si gooni ah loo xuso, maadaama ay tahay mid ka mid ah dharka ugu caamsan ee dharka gobolka Galician. Waa gabal maro ah oo dhabarka la saarayo oo labadiisa daraf laabta la marsiiyo si dib loogu noqdo oo mar labaad dhabarka loogu xidho. Sida caadiga ah, waxaa lagu qurxiyaa maro jilicsan iyo rhinestones. Qandhada dengue, wuxuu helaa a Shaati cad leh qoorta oo xiran, gacmo -gilgishay iyo jeex -jeexitaan.
Kabaha, oo la yiraahdo galley o xarigleyda Waxay ka samaysan yihiin harag waxayna leeyihiin calaacal alwaax ah. Iyaga, iyaga ayaa la dhammaystiray dharka aasaasiga ah ee dharka Galician ee caadiga ah ee dumarka. Si kastaba ha ahaatee, walxo kale ayaa lagu dari karaa.
Waa kiiska hayso, kaas oo ah daboolka weyn; ee ah refaixo, taas oo iyaduna la dul saaray kabaha yaryar iyo popolos, nooc ka mid ah nigisyada dhaadheer oo gaadha jilbaha kuna xidha shalash. Isla sidaas ayaa la dhihi karaa shawl, macawis siddeed gees leh, ee kalzas ama warbaahinta, ee labalaab iyo kuwa jaakad. Ugu dambayn, waxay heshaa magaca toad setkii qurxinta ee laabta sudhan oo soo afjaraya faahfaahinta suudhka.
Dharka Galisiga ee caadiga ah ee ragga
Biibiileyaal ku labisan dharka gobolka Galician ee ragga
Dhankeeda, dharka caadiga ah ee Galician ee ragga ayaa ka kooban inta badan lugaha madow, jaakad, jaakad iyo koofiyad. Kuwa hore waa nooc surwaal ah oo gaara jilbaha. Mararka qaarkood waa la kaabayaa lugahaSidoo kale leggings -ka qaarkood, laakiin taasi waxay ka baxdaa qaybtaas dambe ee jirka ilaa kabaha. Tan dambe waxay soo muuqatay qarnigii XNUMXaad si ay u beddesho sharabaadadii, inkasta oo ay wali yihiin kuwo la isticmaalo.
Surwaalka hoostiisa, waxaad kaloo xiran kartaa a cirola. Waa dhar cad oo ah nigis hoostiisa oo hoosta ka soo fiiriya ama la geliyaa gaiter -ka lugta ku xidhan oo xarig leh.
Xagga jaakada, waa la gashaday oo waa la xidhay. Waxa kale oo ka muuqda gacmo cidhiidhi ah iyo laba jeebadood oo siman. Hoosta, a riwaayad iyo wixii ka sarreeya jaakad. Sidoo kale, dhexda tagaa faixa ama suun, oo laba jeer socda, wuxuu leeyahay tassel oo wuxuu yeelan karaa midabbo kala duwan.
Ugu dambeyn, montera o monteira Waa koofiyadda caadiga ah ee dharka gobolka Galician ee ragga. Naqshadeynteeda, waxay ku beegan tahay magaceeda Asturian waxayna asal ahaan ka soo bilaabatay qarniyadii dhexe. Galician wuxuu ahaa mid weyn oo saddex -geesle ah, inkasta oo ay jireen dhegaha -dhegaha maalmo qabow.
Sidoo kale, montera -du waxay ahaan jirtay xidhashada tassellada, xiise ahaanna, waxaan kuu sheegi doonnaa, haddii ay dhanka midig tagaan, qofka xiran uu yahay keli, halka, haddii ay bidixda ka muuqdaan, uu guursaday. Waqti ka dib, waxay siisay fursad dabacsanaan ama koofiyadaha, oo horeba loo sameeyay dareen, horeba u ahaa nooca beret ee aagga Vigo (halkan ayaad haysataa maqaal ku saabsan magaaladan).
Dhinaca kale, in kasta oo ay mar horeba dhacday, haddana waxaa jiray qayb kale oo aad u xiiso badan oo ahayd dharka Galiciga caadiga ah. Waxaan ka hadalnaa coroza, koofiyad ka samaysan caws oo loo isticmaali jiray maalmaha ugu qabow sannadka.
Goorma ayaa la adeegsadaa dharka gobolka Galbeedka?
Xafladaha Arde Lucus
Markaad ogaato dharka Galician ee caadiga ah, waxaad sidoo kale xiisayn doontaa inaad ogaato marka la isticmaalo. Caqli ahaan, ciidaha magaalooyinka Galicia oo dhan waxaa jira dad ku labisan dharkan.
Caadiyan, waxay qayb ka yihiin orchestras dhaqameedka oo xubnahoodu yihiin fannaaniinta dabaysha iyo garaaca. Marka laga hadlayo qoyska koowaad ee qalabka, turjumaanada Galbeedka boorsada Galician, xataa haddii ay kaligood shaqeeyaan.
Qalabkan waxaa iska leh dhaqanka ugu qoto dheer dhulkaas, ilaa heer uu ka mid yahay astaamihiisa. Sababtan awgeed, duuliye lama fahmi karo iyada oo aan lahayn dharka caadiga ah ee Galicia. Waa run in bacda duugga ahi ay iyaduna tahay aasaaska sheekooyinka Asturiyanka iyo xitaa aagga Bierzo iyo Sanabria, laakiin Galicigu wuxuu leeyahay xoogaa kala duwanaansho ah.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, kuwa wax bacaya iyo kuwa durbaanada qaada iyo kuwa qoob -ka -ciyaarka ah ayaa mar walba ku labisan dharka gobolka Galician. Waxayna joogaan xafladaha ugu waaweyn ee dhulkooda. Tusaale ahaan, iyagu kama maqna xafladaha Rasuulka Santiago, ma aha oo kaliya ilaaliyaha Galicia, laakiin sidoo kale dhammaan Spain.
Sidoo kale, waxay lugeeyaan waddooyinka Lugo inta lagu jiro xafladaha San Froilán waxayna ka muuqdaan xafladaha Easter sida kuwa Xannaanada y Jiilaal, dhammaantood waxay ku dhawaaqeen inay danaynayaan dalxiiska. Xitaa waxaad arki kartaa turjubaannadan oo ku labisan dharkii Galiciyaanka ee dabbaaldegyada aan diinta la xiriirin.
Tusaale ahaan, waa wax caadi ah in la helo guutooyin pipers ah Lucus gubasho, halkaas oo dadka reer Lugood ay ku xusuustaan ​​taariikhdoodii Roomaanka; ku dul Feira Franca ee Pontevedra, oo ku salaysan waayihii dhexe ee magaalada, ama Xajka Catoira Viking, kaas oo lagu xusayo imaatinka magaaladaas ciidamada Norman si loo bililiqeysto aagga.
Xajka Catoira Viking
Ugu dambayn, tirada dadka ku lebisan dharka gobolka Galician ee xafladaha gastronomic -ka ayaa aad u badan. Sannadka oo dhan waxaa jira kuwo badan oo gobolka oo dhan ah. Laakiin waxaan kuu iftiimin doonaa kuwa caanka ah Xafladda Cuntada Badda lagu qaban jiray magaalada O Grove Oktoobar kasta, iyo baqtigabiska, kaas oo ka dhacaya Carballino Axadda labaad ee Ogosto. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka cephalopod -kan ayaa aad ugu qotoma Galicia taas oo, ficil ahaan, dhammaan deegaannadu ay leeyihiin dabbaaldegga calooshoodu ku salaysan tahay iyada oo ay dadka asalkoodu u lebisan yihiin dharka caadiga ah.
Gebogebadii, waxaan dib kuugu eegnay Dharka gobolka Galician rag iyo dumarba. Waxaan soo marnay taariikhdeeda iyo walxaha soo jireenka ah si aan ugu dambayn ku tusno meesha aad inta badan ka arki karto. Hadda waa inaad u safartid Galicia oo aad si toos ah u qaddarisaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Dharka gobolka Galiciya